Induction iqubuzela isithando somlilo nge-IGBT Induction Heater
Ikhaya / Izicelo / Ukukhipha Induction / Induction Melting Glass
Ukukhipha i-Induction Glass
Isigaba: Ukukhipha Induction Tags: ingilazi lokungeniswa kuncibilike, ingilazi iyancibilika, indesheni yengilazi yesithando, ukungeniswa kokukhipha ingilazi, ingilazi encibilikayo, encibilikisa isithando sokungenisa ingilazi, uhlelo lokungenisa ingilazi oluncibilikayo
Induction iqubuzela isithando somlilo nge-IGBT Induction Heating Equipment
Inhloso: Ukushisa isitsha se-susceptor yensimbi sifike ku-2200 ° F kungakapheli imizuzu engama-25 ngohlelo lokuncibilika kwe-fiberglass
Okubalulekile: Isitsha se-metal susceptor
Ukushisa: 2200 ° F
Izinsiza kusebenza: DW-MF-70kW RF Ukunikezwa kwamandla okushisa, isiteshi sokushisa esikude kanye nekhoyili eyenzelwe ngokukhethekile yokungeniswa.
Inqubo: Ikhoyili eklanyelwe ngokukhethekile, eyakhelwe ukuhambisana nomkhumbi wensimbi, yasetshenziselwa ukuletha ukushisa okufanayo kumkhumbi. Ukuhlolwa kokuqala kwenziwa ukuze kusungulwe iphethini yokushisa nesikhathi sokushisa. Amandla wokushisa we-RF asetshenzisiwe asetshenziswe imizuzu eyi-11 futhi umkhumbi wafinyelela ku
izinga lokushisa lama-2,200 ° F. Kuphakanyiswe ukuphakelwa kukagesi okwengeziwe okungu-3kW lapho kusetshenziswa ingilazi esemkhunjini ngepayipi lokukhipha amanzi.
Imiphumela: Imiphumela efanayo neyophindaphindwayo itholakele ngokuhlinzekwa kwamandla kagesi we-DAWEI wokufudumeza kanye nekhoyili. Umkhumbi ungagcinwa ku-2200 ° F ukuze ingilazi incibilikiswe ukudweba i-fiber.
Induction Ukuqubula Isiliva
I-aluminium yokuxuba i-Induction